टेन्ट टाँगेर भएपनि प्रदेश २ मा चुनाव हुन्छः प्रमुख आयुक्त - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 National टेन्ट टाँगेर भएपनि प्रदेश २ मा चुनाव हुन्छः प्रमुख आयुक्त
टेन्ट टाँगेर भएपनि प्रदेश २ मा चुनाव हुन्छः प्रमुख आयुक्त
सप्तरी, ५ भदौ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले टेन्ट टाँगेर भएपनि प्रदेश २ को स्थानीय चुनाव गर्ने बताएका छन् । उनले निर्वाचनमा जुट्न आहृवान समेत गरे । सोमबार राजविराजमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘जनप्रतिनिधि भएको भए बाढीको समयमा उद्दार र राहतको काम छिटो र राम्रो तरिकाले हुन्थ्यो । तर नभएकाले समस्या भोग्नुपरेकाले निर्वाचनमा जुट्न सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’
बाढीले धेरै ठाउँमा बाटो बिगारेको, मतदान केन्द्र र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा क्षति पु¥याएको उनले बताए । ‘क्षति पु¥याएका बाटो र कार्यालय मर्मत गर्न सरकारलाई भनेको छु’ उनले भने, ‘चुनावअघि जति काम सकिन्छ ठीक छ । सम्पन्न हुन नसके टेन्ट टाँगेर भएपनि निर्वाचन हुन्छ ।’ प्रदेश २ को चुनावलाई लक्षित गरी जनशक्ति व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिएको बताउँदै उनले चुनावका निम्ति सबै तयारी भएको बताए ।
राजपालाई छाता दिन सकिन्न
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई कुनै पनि हालतमा छाता चुनाव चिन्ह दिन नसकिने बताए । ‘कानुनी र प्राविधिक कुनै पनि तरिकाले राजपालाई छाता चुनाव चिन्ह दिन सकिँदैन’ उनले भने । यसअघि एउटा दलले छाता चुनाव चिन्ह माग गर्दै आयोगमा निवेदन परिसकेको उनले बताए ।